MUUQAAL: Cali Xaraare oo barnaamij uga hadlay Xaalada Baydhaba iyo Mukhtaar Roobow | KALSHAALE
Dec 14, 2018 - 3 Aragtiyood
Garoowe ( Kalshaale ) Waxaanu Halkan idiinku soo Gudbinaynaa Barnaamij Gaar ah oo Cali Xaraare uga hadlay Xaalada magaalada Baydhabo iyo Xadhiga Sh. Mukhtaar Roobow Abuu-mansuur.
Waxaa weli uu muran ka taagan yahay musharraxnimada Mukhtaar Roobow oo shalay la xidhay kaddib markii dowladda Soomaaliya ay sheegtay inuu ka baxay heshiiskii lala galay markiiuu kasoo goostay Al-Shabaab.
“Ma jirto meel uu raalli gelin ku dhiibay iyo meel uu ku sheegay inuu ka tanaasulay mabaadii’dii uu horey u aaminsanaa….sannad ayaa laga jooga , waxbana lagama ogo ninkan howsha iyo heshiiska lala galay”
Somaliya caqli ay ku faanto oo at ethippia ku khiyaamayso ma leh xeebaha dekedaha iyo badda jam somkand talaleedu waxay ka go’daa jam somland wax ka jirana ma jirto ? Mid waan ogolahay in madaxda jam somland madax adagyihiin haa waan luu qirayaa? 8 bilood ka hor markaan lahaa waar badda jam spmland aan ingiis u dhiibno ha inoo ilaaliyee aragti fog baan lahaa oonu mr biixi ila socon waa kii afat wiil intuu meel soo joojiyey maryo cad cadna u soo xidhay
Mr biixi ma rabo dhib aad leedahay adiga iyo qayrkaa toona mana ihi nooca qabyaaladdu dishay ee qofkoosa wacan ku diida qabyaalad kooda xunna ku difaaca qabyaalad ? Ilaahay wuu iga magan geliyey kuwaas laakiin ahaw nin soo jeeda oo madaxweyne u ah dal aan wali la aqoonsan fiiro dheer iyo hadaf fognaleh ? Waxaan kaa uriyaa canaatan mana fiicna canaatanku waxbaa ku burura ee wax kuma dhismaan hareerahaaga eeg ? Siday wax u socdaanna ka boggo ka dib adoo tashi badan samaynaya ku dhaqaaq talo aad u dad badsatay oo yey kaa muuqanin talo adayg iyo isadkee kol baad tahayd xaasha iska ilaali? Inagaa oo jam somland ah ayaa ilaa hadda ku taagan dariiqa saxda ah laakiin waxay u baahantay taxadir iyo isilaalin dheeraada ee ogow taana? Somaliya wax kastoo labadaa nin sameeyaan maaha sharci ? Marka laga hadlayo qawaaniinta u yaaca caalamkan ilbaxa ah ee maanta taliya? Dekedda hobyo waa ku xumayn qabiil oo aan ahayn daacadnimo dalka wax loogu qabanayo hobyo waa la rabnaa sacad inuu deked helo oo u qalmaan laakiin ? Sacabka maxaa habeenkii loo tumaa hadaan xeeladi ku jirin? Hobyo waan la rabaa deked shaqsiyan ee dawladuba sharci kuma joogto wax dhisaysaa miyaanay ahayn hal xaaraani nirig walaala ma dhasho? Kuwii buraan burayey meeyey kaarbad baa loo dhigay cashaa loo sameeyey waa loo niikiyey ? Soddon sanaad u diideen hawiye dhexdiis hadana buraanburkiinii baanu seexan waynay
Baarlamaanka soomaliya waa inuu ogaadaa in saysalwasaaraha iyo madaxweynuhuba diideen habkiiiyo hanaankii haboonaa ee ay ku doorteen labaa shaqsi khayrlaawana wuxuu ku sheegay golaha baarlamaanka oo ka sareeya darajo ahaan isaga qab qable dagaal ? Waa in lagu casilaa hadaalkaa aan xishmadda lahayn ee ka soo baxay khayrlaawe ? Lana tusiyo inuu baal maray hanaankii dimuqraadiyeed ee loo igmaday ? Baarlamaanada reer yurub hadalkaa khayrlaawe wuu ka cadhaysiiyey